Okraina: ny tantara ratsin’i Yula Tymoshenko · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jolay 2011 19:00 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Français, Español, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Nanomboka tamin'ny faran'ny volana jona teo tany Kiev renivohitra ny fitsarana ny praiminisitra taloha tany Okraina, Yula Tymoshenko, izay mpitarika ny hetsika vonimboasary, noho ny fanararaotam-pahefana.
Araka ny nambaran'ny mpanao famotorana, nanampatra ny fahefany i Tymoshenko tamin'ny nanaovany sonia ny fifanarahana amin'ny mpamatsy gazy tany Rosia, ka ny vidiny nifanarahany tamin'ny praiminisitra rosiana Vladimir Poutine tamin'izany dia lafo loatra ho an'ny ekonomia okraniana. Raha voamarina fa meloka izy dia mety higadra folo taona an-tranomaizina.
Hatramin'ny nanombohan'ny fitsarana dia tsy mitsahatra miresaka azy ity ny mpiserasera rehetra na ao Okraina izany na any ivelan'ny firenena. LEvko ao amin'ny Foreign Notes nahita fa sarotra ny hahitana porofo hanamelohana azy:
Izay izany, “Henjehina ho anton'ny fahaverezam-bolan'ny fanjakana okraniana mitentina 190 tapitrisa dôlara i Tymoshenko vokatry ny tsenan'ny angovo nosoniaviny tamin'ny taona 2009 niaraka tamin'ny praiministra rosiana Vladimir Poutine.”
Ahoana no ahazoana antoka fa io tokoa ny vola very?
Namidin'i Poutina na ny Gazprom latsak'io 190 tapitrisa dôlara io tamin'ny NaftoHaz Ikrainy tokoa ve ny gazy raha olona hafa no teo amin'ny fitantanana tany Okraina tamin'izany taona 2009 izany? Tsy azo inoana…
Raha lazaina fa na iza na iza no teo dia nahazo ny lafiny tsara rehetra izany hoe vinavina fotsiny aloha…
Kanefa, raha toa ka voamarina fa meloka i Tymoshenko dia higadra 10 taona, maro no tsy matoky ny fitongilanan'ny fitsarana mandritra ity raharaha ity satria lohandohany amin'ny mpanohitra i Tymoshenko ary handray anjara amin'ny fifidianana parlemantera amin'ny taona 2012 sy ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2015. Ao amin'ny Opendemocracy.net Natalia Sedletska nanoratra:
Hatramin'ny nitondran'ny filoha Yanukovych efa ho 16 volana izao, dia toa ravaravainy ny mpanohitra. Raharaha ratsy maro no anenjehana ireo mpikambana tao amin'ny governemantan'i Yushchenko, kanefa izany ve no paikadin'i Yanukovych hiadiana amin'ny kolikoly? Sa kosa misy ambadika politika?
Efa fantatry ny rehetra fa ny politikan'i Viktor ﻿Yanukovych dia ny hahazo ny fahefana rehetra sy faratampony : tiany ho azo ny ampahany betsaka indrindra amin'ny parlemantera, noho izany tsy maintsy mahazo toerana 226 amin'ny 450 izany ny antokony. Izany no tanjona dradradradrain'ny mpanara-dia an'i Yanukovych. Ny biraon'ny mpampanoa lalàna no fitaovana mahomby ampiasain-dry zareo hahatrarana izany tanjona izany. Tsy azo fidiana ny olona efa nigadra, ka izany indrindra no mahatonga ny fanenjehana miraraka amin'ny mpanohitra tato anatin'ny herintaona voalohany nitondran'i Yanukovych. Tsy maintsy faranana mialoha ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra daholo ny fanadihadihana rehetra hanenjehana ny ekipan'i Tymoshenko.
Ny zava-nitranga tao amin'ny efitrano fitsarana dia manamafy fa resaka politika izy ity. Tao anatin'ny efitrano anankiray mirefy 40m² ny fihainoana mialohan'ny fitsarana tamin'ny andro voalohany, izay nisy fotoana nahazaka olona 100 teo ho eo, izay nomelohan'ny masoivohon'y Firaisam-be Eropeana any Okraina, Jose Manuel Pinto Teixeira, ho “tsy manaja ny mahaolona” [uk] ary i Tymoshenko nampitaha ny zava-nisy tamin'ny andron'ny sovietika.
Mba hanaratsiana kokoa ny zava-misy, tamin'ny 6 jolay dia noroahan'ny mpitsara Kiraîev hivoaka ny efitrano fitsarana ry Yula Tymoshenko sy ny namany satria hono manakorontana. Ilay blaogera Taras of Ukrainiana mitantara ny zava-misy:
Nivadika ho fanehoan-kery ny kisarisarim-pitsarana rehefa tsy nahazaka ny fandrangitana tsy hijanona natao tamin'ny mpanatrika ny fitsarana ny mpitsara. Nianjera tamin'i Tymoshenko sy ny namany ny famaky, anisan'ireny ny solombavambahoaka Mykhailo Kosiv (BYuT), 77, gadra politika tamin'ny andron'ny sovietika.
Tsy nanaiky hampiasa hery tamin'ireto solombavambahoaka ny polisy, dia nantsoina ny hery manokana Berkut handroaka an-dry Tymoshenko sy ny namany ary ny mpanao gazety (jereo ireto sary miaina ireto). Ilay solombavambahoaka avy amin'ny antoko mpanohitra Andriy Shevchenko, izay nanatrika ny fitsarana koa, nanoratra tao amin'ny twitter [uk] mikasika ny nanaovan'ny Berkut azy tamin'io fotoana io:
Ohatry ny hoe nofohany ny sandriko. Tsy tsapako aloha izany tamin'ny voalohany
Araka ny voalazan'i Yulia Tymoshenko, iray andro sy tapany ihany no fotoana nomena ny mpisolo vavany handinihana antontan-taratasy misy pejy 5000, izay nahatonga azy tsy hatory afa-tsy adin'ny roa na telo nandritra ny telo andro nisesy, avy eo indray tsy maintsy manatrika ny fitsarana. Tamin'ny 8 jolay dia voatery nampidirina hôpitaly izy.
Vokatry ny fitondrana tahaka izany dia nihanalaza i Yula Tymoshenko tany Okraina sy tany ivelany. Alexander Motyl ao amin'ny Ukraine's Orange Blues nanazava ny zava-niseho tahaka izao:
Ny zavatra tsy azo atao indrindra amin'ny mpanohitra fanta-daza tahaka itony, sady manana fifandraisana maro, tian'ny olona, manam-pahaizana, mahay miteny, manan-karena sady tsara tarehy, dia ny fitondrana azy eny amin'ny fitsarana. Ankoatra ny hoe, mazava ho azy, tratra ambodiomby izy na misy porofo tsy azo lavina hanenjehana azy. Antontan-taratasy ratsy hanenjehana olo-malaza tahaka itony dia azo antoka fa hivadika tantara malaza iraisam-pirenena ho an'i Tymoshenko ary hitarika ny faharavan'ny fitondrana, indrindra ao Eoropa, izay tian'i Yanukovytch hidirana mafy.
Mazava ho azy fa nalaza be koa i Tymoshenko ao amin'ny twitter. Misy mpikambana 23 501 ho azy ao – isa niakatra be taorian'ny nanaovany kaonty twitter sy niresahany mivantana tamin'ny twitter tao amin'ny efitrano fitsarana. Vao maika niakatra be ny fitsidihana ny kaontiny hatramin'ny alarobia teo izay fotoana nandraran‘ny mpitsara ny tsy fahazoana mandefa mivantana amin'ny fahitalavitra ny fizotry ny fitsarana.
Ilay mpiserasera twitter Slavik (@Slavik_Krayevsk) nanatsoaka [uk] famintinana efa mahazatra ao amin'ny hafatra nalefany ho an'i Tymoshenko:
@Yulia Tymoshenko: Aza miraharaha izay fanenjehana ataon'i [Filoha] Yanukovych any ianao, ato amin'ny twitter fotsiny dia efa misy olona 23 500 tia ANAO sy MANOHANA anao.